Myanmarmall.net | No1. of Myanmar e-Commerce Portal
အကြောင်းအရာ အကောင့် အကူအညီရယူ၇န်
နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲများ တည်းခိုနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာအတွင်း ဟိုတယ်ခြောက်လုံးဖွင့်
တာဝန်သိခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အီတလီနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မိုဘိုင်ဖုန်းလိုင်းလေးသန်း တိုးချဲ့ရန်လျာထားသော်လည်း အခက်အခဲကြောင့် တစ်သန်းခန့်သာ တိုးချဲ့နိုင်မည်
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Myanmar - Thailand
เปิดตลาด AEC และร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์ (AEC Connect) วันที่ 24 - 26 กันยายน 2558 ณ กรุงย้างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် ရော်ဘာဈေးကျနေခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ စိုးရိမ်လာ
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကိုးခုကို ယခုနှစ်အတွက် ပထမဆုံးလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု
ပဲခူးဘက်က မြေကွက်ကို လျှော့ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းလာ
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်တွင် သုတေသနပြုပြီးလျှင် နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များ ခွင့်ပြုမည်ဟုဆို
ဘားကမ့်ပခုက္ကူ လာမည့်နိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းပမည်
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကယ်တင်ခြင်း အား သတိပြုမိစေရန်အစိမ်းရောင် နည်းပညာပြပွဲ သို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များတက်ရောက်နိင်
ကျပ် ၁၅၀၀ တန် ဆင်းမ်ကတ်များ ပိတ်သိမ်းမည်မဟုတ်
ဆီးဂိမ်းနိုင်ငံတကာအားကစားသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ Y talk ဖြင့် အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ခွင့်ရမည်ဆီးဂိမ်းနိုင်ငံတကာအားကစားသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ Y talk ဖြင့် အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ခွင့်ရမည်
ဆီးဂိမ်းနိုင်ငံတကာအားကစားသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ Y talk ဖြင့် အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ခွင့်ရမည်
နယူးချောင်းသာနှင့် သီရိမြိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် လုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးရ
အိမ်ခြံမြေအငှားဈေးကွက် နှုန်းအမြင့်များနှင့် အလုပ်ဖြစ်နေ
238 All 139 Registered Business 99 Member List 251 Products
Brand : My Yangon Office
Category : စီးပွားရေး နှင့် တိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း
My Yangon Office simply offersabetter place to work in Yangon. We provide everything you would expect in your own office and more. My Yangon Office hasamodern design with fully furnished and open desk office space. What We Offer Modern Office 24/7 Access Great Location Flexible Terms ...
City : Yangon Division
Brand : Moe & Tun
From...Moe & Tun Associates
Category : ဟော်တယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်
City : Mandalay Division
Brand : Jobs in Yangon
အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ်းလှမ်းပါသည်။ အလုပ်များကိုအီးမေးလ်�...
From...Jobs in Yangon
JobsIn yangon.com hasaunique workflow engine and very flexible design. That allows an unrivalled level of customisation with very low cost and shortest delivery times. Our suite of automated e-recruiting tools significantly reduces administration costs so company return on investment is measurable...
Tax advisory, Secretarial services, Outsourcing services with SLA, Cloud Based online services, Software services
Brand : capstone
Prepare tax account, audit and consultation.
Beauty Soap Blue (Chamomile) Beauty Soap Green (Jasmine) Beauty Soap Pink (Rose) Beauty Soap Kiwi Extracts (Green) Beauty Soap Peach Extracts (Orange) Beauty Soap Purple (Orchid) Beauty Soap Lemon Extracts Beauty Soap Strawberry Extracts